Nanohana An’i Emmanuel Macron Ve Ny Al-Qaeda? Tsia · Global Voices teny Malagasy
Nanohana An'i Emmanuel Macron Ve Ny Al-Qaeda? Tsia
Voadika ny 01 Febroary 2018 19:14 GMT
Vakio amin'ny teny русский, عربي, Español, Deutsch, English
Mifototra amin'ny asa fanamarinana tarihin'ny fiaraha-miasan'ny efitra famoaham-baovao any Frantsa sy ny Fanjakana Britanika amin'ny alalan'ny CrossCheck (teny Frantsay| teny anglisy) ity lahatsoratra ity, fiaraha-miasa tsy mitady tombontsoa mba hiadiana amin'ny vaovao faikany an-tserasera, ary navoaka eto indray ho anisan'ny fiaraha-miasa amin'ny Global Voices.
Tamin'ny 22 Martsa 2017, namoaka ny pikantsarin'ny lahatsoratra iray nosoratana tamin'ny teny Arabo ny mpisera Twitter @AudreyPatriote. Nahitana ny sarin'ny kandida filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron ilay lahatsoratra. Toy izao ny vakin'ny sioka: ” Efa nisafidy ny kandidany ny Al-Qaeda dia i # Macron izany…”
Avy amin'ny lahatsoratra iray nivoaka tamin'ny 27 Febroary tao amin'ny gazety Al-Masra ny pikantsary. Ity lahatsoratra ity dia mifantoka amin'ny fanambarana nataon'i Macron nandritra ny fitsidihana tamin'ny volana Febroary tany Alzeria izay nilazany ny fanjanahantany ho “heloka bevava atao amin'ny olombelona.”
Ny lahatsoratra dia mitondra ny lohateny hoe: “Nanambara ny iray amin'ireo kandida lehibe amin'ny fifidianana filoham-pirenena Frantsay tany Alzeria fa toy ny ‘heloka bevava atao amin'ny olombelona’ ny fanjanahantany.” Mifantoka amin'ny tsikera azon'i Macron avy tamin'ireo mpanao politika Frantsay hafa tamin'ilay fanambarany ny lahatsoratra .
Mifandray amin'ny sampan'ny Al-Qaeda ao amin'ny Saikinosy Arabo ny Al-Masra. Na izany aza, ny votoatin'ity lahatsoratra izay mifototra amin'ny zava-misy ity dia tsy mifanaraka velively amin'ny filazan'ny sioka fa manohana ny firotsahan'i Macron ho fidiana an'ny filoham-pirenena Frantsay ny Al-Qaeda.
Azonao atao ny mamaky momba ny famolavolana hafa sy ny fifidianana frantsay ato .
Azia Atsinanana 13 ora izay